Elon Musk Na-ekwu, Apple Na-akwụ ụgwọ Onye Njọ Nwee Nkata Tesla | Esi m mac
Elon Musk na-ekwu na Apple na-ewe naanị ndị injinịa Tesla kasị njọ
El CEO nke Tesla Motors Elon Musk, ị na-adịghị eche ọtụtụ ihe banyere Apple si atụmatụ iwu a ụgbọ ala eletrik, kpughere n'ajụjụ ọnụ nke akwụkwọ akụkọ German Handelsblatt. Mgbe a jụrụ ya banyere eziokwu ahụ bụ na Apple na-ego ọtụtụ ọrụ ndị injinia tesla, CEO nke Tesla zara site n'imesi ike na ọ chọghị imerụ onye ọ bụla:
Ha goro ndị anyị chụrụ n'ọrụ. Anyị na-egwu egwu mgbe niile n'ihi na anyị kpọrọ Apple n'azụ ya 'Ebe ili ozu nke Tesla'. Ọ bụrụ na ịnweghị na Tesla, ị ga-arụ ọrụ na Apple. Anaghị m egwu egwu. CEO Elon Musk bụ Tesla Motors zara.
Na echiche Apple banyere ụgbọ ala, ọ kwadoghị ma ọlị na ọ bụ usoro ezi uche dị na ya maka ụlọ ọrụ iPhone. Ozokwa, okwenyeghi na oburu otua, nka gabu ihe a onye mmeri nke Tesla.
N’afọ 2014 onye isi ụlọ ọrụ ahụ kwadoro na ụlọ ọrụ abụọ ahụ nọ enwere ike mkparịta ụka nnweta, ma ọ rụpụtaghị mkpụrụ. Na ọnwa Mee gara aga, o kwukwara na ọ ga - abụ "nnukwu" ma ọ bụrụ Apple ịbanye na akpaaka azụmahịa. Mana n'otu ngosi ahụ, o kwukwara na enweghị ndị injinia Tesla na-aga Apple. Mana nke bụ eziokwu bụ na na Tesla ha amalitela hapụ ndị ọrụ n'ụzọ Apple, ebe CEO gbanwere echiche ya.
Na mbido afọ a, Elon Musk gwara Bloomberg na Tesla na ha goro ndị ọrụ Apple ọrụ karịa Apple nke Tesla na a 5 ruo 1 ruru, n'agbanyeghị eziokwu na Apple enyewo bonuses nke ruo $ 250.000 na mmụba na 60% nke ụgwọ. Ekwenyere na Apple chọrọ ịnweta ụgbọ ala ya n'okporo ụzọ site na 2020.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Esi m mac » Apple » Noticias » Elon Musk na-ekwu na Apple na-ewe naanị ndị injinịa Tesla kasị njọ
Ogbe 23 dijo
Kedu ka ị si tụọ ụjọ na Ilọn !!
Carsgbọala ha dị oke mma, mana ... M ga-asọpụrụ obere ụlọ ọrụ mara ihe esi enweta uru maka ọkpọkọ, ọkachasị mgbe amaara ya na Tesla abaghị uru ọ bụla ma ọrịre ụgbọ ala eletrik dị oke oke. ..
Apple nwere ike ịrụ nnukwu ọrụ na ihe ọ bụla ọ na-etinye uche ya ma nwee nnukwu ego maka ọrụ ahụ, obi abụọ adịghị ya.
Echere m na nke ahụ abụghị eziokwu banyere Tesla. Apple nwere mfe iji gbanwee mpaghara ụgbọ ala. Ihe niile bụ mmanụ, dị ka ọ na ụbọchị na mobiles ihe niile bụ igodo. Ọ bụ ụlọ ọrụ nwere ego kachasị na ego nwere ike ihichapụ ọdụ gas dịka ọdụ mmanụ na ihu ụwa. Ọ bụrụ na onye ọ bụla nwere ike ịgbanwe ụlọ ọrụ ahụ dum bụ Aple dị ka ọ mere na ekwentị, ọ ga-abụ mgbanwe n'ebe ọkụ eletrik dị. Na ego ha ga-echekwa
Ahịa Mac dara na afọ 2, mana ọ ka dị elu karịa ụlọ ọrụ PC
Nkọwa n'etiti Microsoft na Apple ultrabooks